ဆိုတော့ ရောက်သွားတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က အော်ဖာ (ကမ်းလှမ်းချက်) ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ငွေ စတာလင် ၂ ပေါင်ခွဲနဲ့ စာတိုက်ခ (စာပို့ခ) နောက်ထပ် စတာလင် ၂ ပေါင်ခွဲ ပေးရင် ၁၉၆၇ ခုနှစ်ထုတ် အယ်လ်လိဇဘတ် ဘုရင်မကြီးရုပ်ပုံပါ ဒင်္ဂါးတပြားရမယ်လို့ ကြေညာထားတာတွေ့တော့ အမှတ်တရတော့ ၀ယ်ဦးမှလို့ စိတ်ကူးမိတယ်။
ထမင်းတခါစား ၅ ပေါင်လောက် ကျနေတော့ ထမင်းတပွဲစာပဲ ရှိပါတယ်လေဆိုပြီး အချိုအချောင်ရတာပဲလို့ မှတ်ပြီး မှာယူလိုက်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ဘဏ်စာရင်း အချက်အလက်တွေနဲ့ အိမ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် အကုန် ဖြည့်သွင်းရတာပေါ့။ သူက ရေးထားသေးတယ်၊ ဒါက လျှောက်လွှာအဆင့်ပေါ့လေ… လျှောက်လွှာအောင်မှ (ကံကောင်းမှ) ၀ယ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့။
အလုပ်မလုပ်ဘဲ သူဌေးဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပြီး ယူရိုမီလီယံ (ယူရိုသန်းထီ) ပေါက်လေအောင် ကံစမ်းတာလည်း ပေါင် ၅၀ ကျော်၊ ၆၀ လောက် ပါသွားဖူးပါပြီ။ အမေကလည်း ဖုန်းဆက်ရင် “မင်းအတွက် ဗေဒင်မေးစမ်းကြည့်တာ ဗေဒင်ဆရာက မင်းမှာ ထီပေါက်ကိန်း ရှိတယ်လို့ ဟောတယ်ကွဲ့၊ ထီလေး ဘာလေး ထိုးကြည့်စမ်းပါ၊ ထီပေါက်ဖို့ဆိုတာ ထီထိုးထားမှ ရတာ သားရဲ့“ မိခင်ကပြောလို့ ကျွန်တော်လည်း မိခင်စကား နားထောင်ပြီး ကံစမ်းနေတာ တခါမှတော့ မပေါက်သေးပါဘူး။
တလောကပဲ (ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ) စကော့တလန်က အငြိမ်းစား ဇနီးမောင်နှံ ယူရိုငွေ သန်း ၁၈၀ ကျော် ထီပေါက်သွားကြတာ ကျွန်တော့်မှာ ကျွန်တော် မရပေမယ့် ၀မ်းသာ အားကျလိုက်ရတာ…။ သူတို့က တစောင်တည်းထိုး တစောင်ပေါက်ဆိုပဲ…၊ နည်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တော့ ပြောခဲ့သလို အလကားရဖို့ ကံက ငယ်ငယ်ကထဲက မပါခဲ့ပါဘူး။ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်မှသာ ပိုက်ဆံရခဲ့တာချည်းပါပဲ။
19/07/2011 at 5:25 am
စိတ်ဝင်စားစရာပါဘဲ အခုလို အတွေ့အကြုံနားထောင်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
19/07/2011 at 5:26 am
နိုင်ငံခြားမှာနေရတာ မလွယ်ပါဘူး မျက်စိထောက်ထောက်………….မလွယ်ဘူး ရူးနိုင်တယ်လို့သီချင်းလေး အော်ဆိုနေရမလိုပါဘဲ။
ဒ်ဂ်ါးပြားးလေးဘယ်မှာ သိမ်းထားလဲဟင်. စိတ်နာလို့လွတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် ဒီဘက်ကလေး. စလုံးဘက် ပစ်လိုက်ပါ။
19/07/2011 at 5:28 am
အဲသာ အမေ့ကြောင့်အမေ့ ဒဂ်ါးလေး သတိရနေတာ နဲ့ အဲသလိုဖြစ်ရတာ အမေ့ဆီက ပြန်တောင်း.
19/07/2011 at 5:30 am
ဒီလိုဘဲ ကားသော့ကြီးပို့ပြီး သင် သည် ဆယ်ယောက်ထဲတွင်ကံကောင်းသူဖြစ်သည် မဲလာနဗှိုက်ပါရန် ဖိတ်စာရဘူးတယ်။ မနည်း စိတ်ျေလျှာ့ပြီး မဲသွားမနှိုက်ဘို့ မေ့ပလိုက်ရတယ် ကားသော့ကြီးတောင် သိမ်းထားရမလိုလို ဘာလိုလုဖစ်သွားတယ်။ အော်ဒုတ်ခ ဒုတ်ခ.။